UGabriel García Márquez: i-biography, amabinzana kunye neencwadi | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Ababhali, Iincwadi, Iincwadi
Abanye ababhali banako ukubetha isimbo kunye nomfundi ngesivakalisi esinye. Ukukhupha amabhabhathane amthubi ezintliziyweni kwaye uwahambise ngokupheleleyo uye kwenye indawo, kumabali abo kunye nabalinganiswa. Omnye wabo babhali nguGabriel García Márquez, unyana wombhali waseColombia ophawulwe ngobunyani bemisebenzi kunye nemisebenzi esele iyinxalenye yembali yoncwadi ngonaphakade. Sijoyine kolu hambo amabinzana, i-biography kunye neencwadi zikaGabriel García Márquez.
1 UGabriel García Márquez: ukusuka eMacondo ukuya kwihlabathi
2 Iincwadi ezilungileyo zikaGabriel García Márquez
2.1 Iminyaka eyikhulu yedwa
2.2 Uthando ngamaxesha ekholera
2.3 Ingxelo yokufa eyaxelwa kwangaphambili
2.4 I-colonel ayinabani wokumbhalela
2.5 Ukwindla koBhishophu omkhulu
2.6 Imemori yehenyukazi lam elibuhlungu
UGabriel García Márquez: ukusuka eMacondo ukuya kwihlabathi
Ukufota: UAlberto Piernas
Uthando luhlala luhleli ngelixa luhlala.
Ndivele ndazothetha emnxebeni
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndafumana ithuba lokundwendwela IAracataca, Idolophu elahlekileyo phakathi kwemithi yeebhanana kunye neentaba zeCaribbean yaseColombia apho uGabriel García Márquez wazalelwa khona nge-6 Matshi 1927. Indawo ekude apho onke amakhaya, umsele okanye inkumbulo ijikeleze Ibhaso likaNobel kuNcwadi: usapho lwakudala oluguqulwe namhlanje lwaba yimyuziyam enamabinzana kunye nefenitshala yezinto zakudala, amabhabhathane ephepha achukumisa eminye imithi okanye iisampulu zobugcisa zasezidolophini ezonakalisiweyo ezimele umbalisi wamabali obalaseleyo le dolophu (kunye neColombia) bayinike umhlaba.
Kwakule dolophu inye apho uGabo aqala ukumamela amabali kamakhulu wakhe, umfazi ocinga kunye neenkolelo, owayezokukhuthaza umsebenzi wakhe wamva. Iindawo ezifana I-telegraph eyaziwayo yeAracataca apho utata wakhe wayesebenza ngaphambi kokutshata nomama wakhe emva kwebali lothando elathintelwa ekuqaleni ngabazali bakhe.
Umzimba womntu awenzelwanga iminyaka umntu anokuphila ngayo.
Uthando kunye nezinye iidemon
Emva kobuntwana obabonakaliswa yimeko yakhe njengenkwenkwana eneentloni eyabhala imibongo ehlekisayo kwikona yesikolo ekuhlalwa kuso e-Barranquilla, uGabo waqala ukufundela ubugqwetha eBogotá, waphumelela ngo-1947. Ugqibe kwelokuba angawamkeli umsebenzi njengegqwetha kwaye ajolise kubuntatheli, into aqala ukuyidibanisa nokubhalwa kwayo amabali aphefumlelwe yimisebenzi enje ngeMetamorphosis, nguFranz Kafka, Amawaka kunye neNight One okanye amanye amabali kamakhulu wakhe ekhuphe imicimbi emnandi efakwe kwilizwe eliqhelekileyo, lemihla ngemihla.
UGabriel García Márquez wadibana nothando olukhulu lobomi bakhe, IMercedes barchaNgexesha lokufudumala ebuntwaneni, waba lihlakani lakhe elikhulu kwaye wazithemba. Ngapha koko, emva kokuzalwa konyana wabo uRodrigo e1959, usapho lwafudukela eMexico City emva kwezisongelo ezifunyenwe ngabaphikisi abahlukeneyo baseCuba kunye namalungu e-CIA malunga neengxelo ezenzelwe iphephandaba iPrensa Latina laseNew York.
Umbhali olungileyo unokufumana imali elungileyo. Ingakumbi ukuba usebenza norhulumente.
Ufakwe kwikomkhulu laseMexico, uGabo kunye nosapho lwakhe bajongana nenye yeemeko zezoqoqosho ezimbi kakhulu, ziqhutywa kukwenziwa kwinoveli ebizwa ngokuba Iminyaka eyikhulu yedwa eyadlula kumawaka kusilelo phambi kokuba ifike kwindlu yokupapasha yaseSudamericana, eArgentina, ngo1967. Babengayicingi nokuyicinga into yokuba umsebenzi ungaphela uyintengiso kunye nesithuthi esifanelekileyo kwindalo iphela apho onke loo mabali athi imele ilizwekazi liphela.
Ukuhambelana nalowo kwaziwa njenge «latin american boom«, Umsebenzi kaGabo waqala ukufumana ukuphakama okuphezulu, waba ngomnye wababhali abakhulu besizukulwana sakhe kwaye, ekugqibeleni, ngamazwi esiSpanish.
Iincwadi ezilungileyo zikaGabriel García Márquez
Izinto zinobomi bazo, yonke into ngumba wokuvusa umphefumlo.
Kuthathwa njengenye ye ezona ncwadi zilungileyoUmsebenzi omkhulu kaGabo waba yimpumelelo engalindelekanga emva kokupapashwa kwayo ngo-1967, ngokuhambelana nokuqhelana nobunyani bobugqi obabusele buqinisiwe ngabanye ababhali abanjengoJuan Rulfo waseMexico. Cwangcisa kwidolophu ebuntsomi ye Macondo (Ngokwenyani iAracataca), ibali libalisa inguqu yosapho lakwaBuendía njengesafobe esifanelekileyo kwilizwekazi elinomlingo apho iinkolelo, ulawulo lwaseMelika okanye ukulahleka kwamaxabiso athile kulungiselela ibali elikhethekileyo elijikeleze abalinganiswa abanjengo-ularsula Iguarán, umatriki ovela Usapho lukhuthazwe ngumakhulu kaGabo.
Ngaba ungathanda ukufunda Iminyaka eyikhulu yedwa?
Kwakungenakuphepheka: ivumba leeamangile ezikrakra lihlala limkhumbuza ngekamva lothando olungqubanayo.
UGabo wayesoloko esithi ngaye "yincwadi yakhe ayithandayo", mhlawumbi ngenxa yenqaku elikhutshiweyo ibali lothando labazali bakhe apho le noveli yapapashwa ngo-1985 iphefumlelwe.Beka kwisixeko kwiCaribbean yeCaribbean (mhlawumbi eyaziwayo ICagagena de Indias okhuthaze umbhali kakhulu), Uthando ngamaxesha ekholera Ubalisa ngothando lukaFlorentino Ariza noFermina Daza, abatshate nogqirha uJuvenal Urbino iminyaka engamashumi amahlanu ananye, iinyanga ezilithoba neentsuku ezine.
Ingxelo yokufa eyaxelwa kwangaphambili
Onke amaphupha ngeentaka asempilweni entle.
Nangona uGabo wayeza kunyuka adume njengombhali oyintsomi, akufuneki singawutyesheli umsebenzi onzima weNobel Prize njengentatheli. Umsebenzi olungileyo ogqogqa iincwadi ezinje, iphazili yexesha kunye nokulinga esekwe ekubulaweni okwenyani okwenzeka ngo-1951 okwathi, kwatshintshelwa kwinyani, kwaba ukwakhiwa ngokutsha kokufa kukaSantiago Nasar ezandleni zomnye wabemi bedolophu eyaziyo ukukhulelwa kolwaphulo-mthetho. Incwadi yapapashwa ngo-1981 iba yenye yeencwadi ezaziwayo zikaGabriel García Márquez.
Lee Ingxelo yokufa eyaxelwa kwangaphambili.
I-colonel ayinabani wokumbhalela
Alikaze lihambe ixesha nantoni na.
Umsebenzi wesibini nguGabriel García Márquez yinoveli emfutshane ethi, ngaphandle kobude bayo obufutshane, inesizathu esinamandla njengokulahleka konyana olinganiswe ngabazali bakhe, ngakumbi ngu-colonel ongazange afumane ipenshini elinde iinkonzo zakhe ngexesha Imfazwe yeentsuku eziliwaka. Kubalulekile.
Fumanisa imbali ye I-colonel ayinabani wokumbhalela.
Ukwindla koBhishophu omkhulu
Sasisazi kakuhle ukuba kunzima kwaye kungxamile kodwa kwakungekho enye, Jikelele.
Ubudlelwane obusondeleyo phakathi kukaGabriel García Márquez kunye nenkokheli yaseCuba uFidel Castro yayihlala iphikisana. Ngapha koko, bathi uzwilakhe wayengayithandi le noveli, apho uGabo abalisa ngobomi bommandla weLatin America ngokweendlela ezahlukeneyo. Ukwindla koBhishophu omkhulu Yapapashwa ngo-1971, ukuqala ishumi leminyaka apho amazwe afana neCuba ayentywiliselwe kubuzwilakhe kwaye amanye afana neRiphabhlikhi yaseDominican ayesachacha kwidyokhwe kaTrujillo.
Imemori yehenyukazi lam elibuhlungu
Uphawu lokuqala lokwaluphala kukuba uqala ukufana notata wakho.
Impikiswano ibuyele kuGabo ngale noveli ithetha ngokuthatheka kwendoda endala efumanisa uthando okokuqala ngqa ngokufikisa. Umdlalo, Uvotelwe eIran kwaye wagxekwa zii-NGOs ezahlukeneyo eMexico, waba ngowokugqibela epapashwe ngumbhali ngaphambi kokubhubha kwakhe ngo-Epreli 17, 2014 ngenxa yomhlaza we-lymphatic owawusele urhuqa iminyaka eliqela.
Awukafundanga Imemori yehenyukazi lam elibuhlungu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » UGabriel García Márquez: i-biography, amabinzana kunye neencwadi